Home version 1 Alt – Full Gospel Assembly
Home version 1 Alt
The content posted in the home page editor will display here. You can insert any shortcode to show up here as well.
(ယောရှုမှတ်စာ ၁၄:၆-၁၅) ကာလက်သည် ယုဒအမျိုးသား ယေဗုန္နာသား (တောလည် ၃၄:၁၉)ဖြစ်၍ ခါနန်ပြည်ကို စူးစမ်းလေ့လာဖို့ရန် ရွေးချယ်ခံရသော ခေါင်းဆောင် (၁၂) ယောက်ထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး၊ ဣသရေလလူမျိုးများအတွက် အဓိကခေါင်းဆောင်မဟုတ်သာ်လည်း မောရှေနှင့် ယောရှုတို့၏ ခေါင်းဆောင်မှုကို အဓိက ကူညီပေးသောသူဖြစ်သည်။ မောရှေနှင့် အသက် (၂၀) အထက်ရှိသောဣသရေလလူမျိုးများ...
ခရစ်ယာန်များအကြားတွင် ပညာလေ့လာဆည်းပူးခြင်းကို ဆန့်ကျင်သည့်အယူဝါ(Anti-In tellectualism)အဖြစ်တွေ့မြင်ရတတ်ပါသည်။ အသိဉာဏ်ကိုဖွံ့ဖြိုးစေခြင်းသည် ယုံကြည်ခြင်းတရားနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေသကဲ့ ထင်မြင်နေကြသည်။ ဓမ္မပညာသင်ကြားသည့် အမှုတော်ဆောင်များကလည်း ယုံကြည်ခြင်း အားနည်းသွားတတ်ကြသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို အားမကိုးတော့ဘဲ မိမိပညာကို သာ အားကိုးတတ်ကြသည်ဟု သွန်သင်လာကြသည်။ ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့် ဘုရားပေးသည့် ဦးနှောက်ဉာဏ် ကို ဖွံ့ဖြိုးစေခြင်းသည် ယုံကြည်ခြင်းကို ဆုတ်ယုတ်စေခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊...
သိုးထိန်းတည်းဟူသောသင်းအုပ်၏ သင်းအုပ်ဆိုင်ရာ ကြည့်ရှုပြုစုခြင်းလုပ်ငန်းတွင် အရေးကြီးသောလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးအကြံပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ကြည့်ရှုပြုစုခြင်းသည် အချိန်တိုင်းလုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး၊ တိုင်ပင်ဆွေးနွေး အကြံပြုခြင်းသည် လိုအပ်သောအချိန်တွင်လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းသည် သင်းအုပ်များကသာ လုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်း မဟုတ်ဘဲ ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်များ၊ သင်းထောက်များ၊ အသင်းတော်ကဏ္ဍ အသီး သီးမှ ကော်မီတီဝင်များ၊ ကောင်းဆဲလိန်းလုပ်ငန်းကို စိတ်ဝင်စားသော သာမန်အသင်းသားများ...
ဟေဗြဲ ၄း၁၂ ထဲမှာ ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာအသက်ရှင်တယ်။ အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာထဲမှာ Living and Active လို့ရေးထားပါတယ်။ Active ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဖုန်းတစ်လုံးကိုဝယ်တယ်ဆိုရင် ဖုန်းတစ်လုံးရှိရုံနဲ့ သုံးလို့ရတာမဟုတ်ပဲနဲ့ Sim Card ထည့်မှသာ Activeate ဖြစ်ပြီးသုံးလို့ရပါတယ်။ Activated ဆိုတာက လှုပ်ရှားတယ်၊ ဆက်သွယ်လို့ရတယ်၊ အသက်ဝင်တယ်၊ စကားပြောလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ထိုနည်း၄င်းပဲ ဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာ အသက်ရှင်ပြီးအလုပ်လုပ်တယ်။ စကားပြောတယ်။…